यी ११ कारणले दरबार हत्याकाण्डमा सधैं आशंका (भिडियोसहित) - Kendrabindu Nepal Online News
यी ११ कारणले दरबार हत्याकाण्डमा सधैं आशंका (भिडियोसहित)
‘पिएम, तपाईं भ्रष्ट हुनुभयो भनेर वाहिरवाट धेरै कुरा आएका छन् ।’ तत्कालिन प्रधानमन्त्री गिरिजा प्रसाद कोइरालालाई नयाँ राजा ज्ञानेन्द्रले यसो भन्ने बित्तिकै कोइरालाले जवाफ फर्काएछन् – ‘महाराजले पनि दाइको हत्या गरे भन्दैछन् ।’ प्रधानमन्त्रीको जवाफले तत्कालिन राजा ज्ञानेन्द्र चुप भएछन् ।
सार्वजनिक रुपमा समेत कोइरालाले दरबार हत्याकाण्डलाई ‘ग्राइण्ड डिजाइन’ को संज्ञा दिए । तर, उनको यो भनाइको अर्थ के थियो ? कसैले बुझेनन् । त्यसैगरी तत्कालिन प्रधानमन्त्रीहरु पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव कुमार नेपालले पनि दरबार हत्याकाण्डको पुन छानविन गर्नुपर्ने माग गरेका थिए । आधिकारिक मानिसले छानविन प्रतिवेदनमाथि गरेको आशंकाले आम मानिसमा समेत आशंका थपेको थियो ।
त्यसैगरी अभिनेता नीर शाहले पनि दरबार हत्याकाण्डका सम्बन्धमा दुई बर्षपछि बोल्ने सार्वजनिक मञ्चवाट घोषणा नै गरेका थिए । नीर शाहका दाजु खड्गबिक्रमको दरबार हत्याकाण्डमा मृत्यु भएको थियो भने नीर तत्कालीन अधिराज कुमार धिरेन्द्रका अनन्य मित्र मानिन्थे । तर उनले १८ बर्षपछिसम्म पनि त्यस घटनाका वारेमा मुख खोलेका छैनन् । उनले किन दरबार हत्याकाण्डका सम्बन्धमा त्यसो भनेका थिए, कसैले बुझ्न सकेका छैनन् ।
२०५८ साल जेठ १९ गते राती १० जनाको हत्या भएको दरबार हत्याकाण्डका वारेमा छानविन प्रतिवेदनले तत्कालिन युवराज दिपेन्द्रले सबैलाई खेदी खेदी गोली हानी हत्या गरेको उल्लेख गरेको छ । नाम नखुलेको कालो पदार्थ खाएर होस् गुमाएका युवराजले एक्लै एके ४७, अर्को पनि पेस्तोल, छर्रा लगायत धेरै किसिमका बन्दुक चलाएको उल्लेख छ । जो आफैंमा बिश्वसनीय मानिएन । तत्कालिन दरबारले निकालेको विज्ञप्ती पत्याउने हो भने स्वचालित हतियार आफैं पड्कियो र घटना घट्यो ।
दरबार हत्याकाण्डको विषयमा पुस्तक लेखेका प्रा.डाक्टर राजकुमार पोखरेलको दावी अनुसार दिपेन्द्रका ५ वटा डमी थिए । र, सवैले भिन्न भिन्न बन्दुक चलाएका थिए । उनका अनुसार एउटै समयमा ९ जनालाई खेदेर गोली हानिएको थियो । लेखक खगेन्द्र संगौलाले समेत दिपेन्द्रले हत्या गरेको भन्ने निश्कर्षमा लेख र पुस्तिकामार्फत औंला ठड्याएका थिए ।
यस्ता धेरै तथ्य छन् जसले त्यस घटनालाई आशंकाको घेरामा राखिदियो । यसैप्रकारका अनुत्तरित र अविश्वसनीय कुराले दरबार हत्याकाण्डको छानविन प्रतिवेदनलाई आम मानिसले विश्वास गर्न सकेनन् ।
१. प्रधानमन्त्रीलाई ‘नो इन्ट्री’
– घटना भएपछि मृतक र घाइतेहरुलाई तत्काल सैनिक अस्पताल छाउनी लगियो । तत्कालिन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला पनि सुन्ने बित्तिकै अस्पताल पुगे । तर, उनलाई अस्पताल भित्र छिर्न दिइएन । गेटवाटै फर्काइयो । आफ्ना राष्ट्रप्रमुखलाई अन्तिम समयमा पनि हेर्न नदिएको किन होला ? घटनामाथि शंका सुरु हुने एउटा कारण यो पनि रह्यो ।
२. कर्फ्यू लगाएर आर्यघाटमा लास जलाइयो
– हत्या भएकाहरुको लाश अस्पतालवाट आर्यघाट पु¥याउँदा र्कफ्यू लगाइयो । ट्रकमा हालेर बाटो सुनसान पार्दै लगेर जलाईयो । शोकाकुल जनतालाई मलामी जानवाट पनि रोकियो ।
३. छानविन समितिमा विवाद
तत्कालिन प्रधानान्यायाधीशको संयोजकत्वमा ३ सदस्यीय छानविन समिति बनाइयो । समितिमा तत्कालिन सभामुख र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता समावेश थिए । तर, समितिका एक जना सदस्यले छानविन समिति घोषणा भए लगत्तै राजिनामा दिए । राजिनामा दिने सदस्य थिए, तत्कालिन प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता माधव कुमार नेपाल । उनले राजिनामा दिएपनि दुई सदस्यीय समतिले नै काम ग¥यो । र, प्रतिवेदन सार्वजनिक ग¥यो ।
प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेका तत्कालिन सभामुख तारानाथ रानाभाट हाँसोका पात्र बने । गोली चलेको अभिनय गर्दै सुनाइएको प्रतिवेदनमा छानविन गरेको केही देखिएन । मात्र प्रत्यक्षदर्शीको बयान सुनाइयो । यसकारण छानविन प्रतिवेदन अपुरो र एकतर्फी भएको विश्लेषण भयो । जसलाई आम मानिसले विश्वास गरेनन् ।
४. पोष्टमार्टम समेत गरिएन
– दरबार हत्याकाण्डमा १० जनाको मृत्यु भयो । डिएनए टेष्ट त धेरै टाढाको कुरा कसैको पनि पोष्टमार्टम समेत गरिएन । छानविन समितिले दिएको रिपोर्टलाई यस कारण पनि आधारहीन मानियो ।
५. अंगरक्षक र सुरक्षाकर्मीमाथि प्रश्न
– दरबार हत्याकाण्ड नारायणहिटी भित्रको बिलियार्ड बैठकमा भएको थियो । त्यसठाउँमा सुरक्षाकर्मीलाई छिर्न दिइएको थिएन भन्ने कुरालाई मान्न सकिन्छ । तर, प्रतिवेदनमा त तत्कालिन युवराज दिपेन्द्रले खेदिखेदी गोली हानेको उल्लेख छ । बगैचातिरसम्म खेदेको उल्लेख छ । त्यसवेलासम्म सुरक्षाकर्मीले किन घटनालाई नियन्त्रणमा लिएन भन्ने प्रश्नको जवाफ कहिल्यै कतैवाट आएन ।
६. संरचना ध्वस्त गरियो
– दरबार हत्याकाण्ड भएको स्थल हो, बिलियार्ड बैठक । यो आफैंमा ऐतिहासिक स्थल हो । तर, आजको पुस्ताले त्यो बैठक देख्न पाउँदैन । किनभने तत्कालिन नयाँ राजाले दरबार हत्याकाण्ड भएको केही समयपछि नै त्यसलाई भत्काउन लगाए ।
त्यस भवनमा भएका फर्निचरहरुको ब्यवस्थापन कसरी गरियो त्यो पनि कसैलाई थाहा छैन । त्यतिमात्र होइन, गोली चलेर भत्किएका भित्ताहरु र पोखरी पनि पुरियो । यो त्यही पोखरी हो, जहाँ दीपेन्द्र गोली लागेर ढलेको वताइन्छ । यस्तो किन गरियो, कसैलाई थाहा छैन ।
७. गोली चलाउनेमा आशंका
– प्रतिवेदनले युवराज दीपेन्द्रले सवैैलाई एक्लै गोली हानी हत्या गरेको भनिएपनि कतिपय आशंकाहरु पैदा गरेको छ । पहिलो नम्बर दिपेन्द्र नाम नखुलेको कालो पदार्थ खाएर मातेका थिए भनिएको छ भने उनले शक्तिशाली एके ४७ नामक बन्दुक कसरी पड्काउन सके भन्ने प्रश्न छ । यो बन्दुक चलाउन निकै नै तालिम प्राप्त बलियो मानिस चाहिन्छ भन्ने अनुभवीहरुले वताउँदै आएका छन् ।
त्यसैगरी उनले कति किसिमका बन्दुक चलाएका थिए भन्ने अर्को प्रश्न छ । कोमललाई लागेको गोली छर्रा रहेको पुष्टि भइसकेको छ भने उनले कञ्चटमा हानेको गोली सामान्य पेस्तोलको हो भन्ने पनि पुष्टि भइसकेको छ । घटनामा अन्यखाले गोली पनि भेटिएको त्यसवेला धेरैले प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्षरुपमा वताएका थिए ।
त्यसैगरी छानविन समितिलाई प्रत्यक्षदर्शीले सुनाएको वयान पत्याउने हो भने दिपेन्द्रले सवैलाई बन्दुक तेर्साए तर मलाई नमार्नु भनेर अनुरोध गर्नेहरुलाई मारेनन् । तर, आफ्ना पिताको बंश बिनास गर्न भने उनले कसैका कुरा सुनेनन् । यो प्रसंग पनि अपत्यारिलो नै सावित भयो ।
८. सम्पत्ति नामसारी गर्ने कार्य सुरु भयो
– ०५८ जेठ १९ पछि राजा भएका ज्ञानेन्द्रले सोही बर्षको भदौ ३ गतेदेखि नै सम्पत्ति आफूमा सार्ने कामको सुरुवात गरे । आरम्भमा उनले कित्ता नम्बर २४, ३४, १८१ र १८३ को काठमाडौँ दहचौक गाविस–५ मा तत्कालीन शाहाज्यादी शीताष्मा (पूर्वअधिराजकुमार धीरेन्द्रकी छोरी)को नाममा रहेको १५ रोपनी ५ आना जग्गा पत्नी कोमलका नाममा सारे । स्वर्गीय राजा वीरेन्द्रका नाममा रहेको काठमाडौँ–८, टंकेश्वरको १ रोपनी ८ आना जग्गा पनि ज्ञानेन्द्रले ०६० भदौ १ गते आफ्नो स्वामित्वमा लिए ।
दरबार हत्याकाण्डपछि जग्गाहरुको नामसारी गर्ने तरिका रमाइलो छ । पुरानो राजाको नाममा रहेको जग्गा नयाँ राजाको नाममा र पुरानी रानीको नाममा रहेको जग्गा नयाँ रानीको नाममा नामसारी गरिएको देखिन्छ । त्यसैगरी युवराजको नामको युवराजकै नाममा र युवराज्ञीको सम्पत्ति युवराज्ञीकै नाममा नामसारी गरियो ।
नामसारी गर्नु स्वभाविक भएपनि अढाई महिनापछि देखि नै यो कार्य गर्नुलाई पनि सुन्नेले निको मानेनन् । अझ भाइ धिरेन्द्रका छोरीहरु हुँदा–हुँदै पनि आफ्नै स्वामित्वमा सम्पत्ति ल्याउनुले आशंका जन्मायो । स्मरण रहोस् तत्कालिन अधिराजकुमार धिरेन्द्र, दरबार हत्याकाण्ड र केही समयपछि श्रीमती प्रेक्षाको मृत्यु हेलिकप्टरमा भएपछि छोरीहरुको बिचल्ली भएको थियो ।
९. छानविन समितिको प्रतिवेदनलाई प्रधानमन्त्रीले नै पत्याएनन्
– दरबार हत्याकाण्डका वेला प्रधानमन्त्री थिए, गिरिजाप्रसार कोइराला । उनले यस हत्याकाण्डलाई ‘ग्राइण्ड डिजाइन’ को संज्ञा दिए । अर्थात उनले प्रतिवेदनले भनेजस्तो तत्कालिन दीपेन्द्रले हत्या गरेको भन्ने पत्याएनन् । तर, के थियो ‘ग्राइण्ड डिजाइन’ को अर्थ पनि उनले कहिल्यै खुलाएनन् । त्यसैगरी गणतन्त्रका दुई प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव कुमार नेपालले बहाल रहेका वेला दरबार हत्याकाण्डको पुन छानविन गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । तर त्यो, भाषणमा नै सीमित रह्यो ।
तत्कालिन प्रधानमन्त्रीका यी वाणीहरुले आम मानिसमा भएको आशंकालाई झनै मलजल ग¥यो । उनीहरुले पुन छानविन गर्ने भनेर किन भनेका थिए भन्ने सम्बन्धमा समेत कसैसँग जवाफ छैन ।
१०. प्रत्यक्ष शासनमा तिब्र आकांक्षा प्रकट
– राजा घोषित हुने बित्तिकै ज्ञानेन्द्रले राजनैतिक दलका नेताहरुलाई ‘म दाजु जस्तो होइन’ भनेर कडा हुने संदेश दिए । र, त्यसैअनुसारको गतिविधि सुरु गरे । सर्वप्रथम उनले नेताहरुलाई कडिकडाउ सुरु गरे र २०५९ असोज १८ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई अक्षम घोषणा गर्दै हटाइदिए । र, पूर्वपञ्चहरुलाई मन खुसी प्रधानमन्त्री बनाउन थाले । २०६१ माघ १९ गते तत्कालिन ठूला पार्टीका नेताहरुलाई जेल हालेर आफैं प्रत्यक्ष शासन सुरु गरे । अर्थात उनले प्रत्यक्ष शासनको हतारो प्रदर्शन गरे ।
११. तीन सय आर्मीलाई एकै पटक विदाई
– दरबार हत्याकाण्ड भएपछि तत्कालिन राजा ज्ञानेन्द्रले नारायणहिटी दरबारमा कार्यरत तीनसय सेनालाई अवकाश दिएका थिए । उनले किन त्यसरी अनिवार्य अवकास दिए भन्ने विषयले पनि आम प्रश्न जन्माएको थियो । वीरेन्द्रका एडिसी, निजि सचिव लगायतलाई समेत तत्कालै हटाइयो । यति सम्म भयो कि चलचित्र विकास बोर्डका तत्कालीन अध्यक्ष नीर शाह समेत पदच्यूत भए ।